April 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ဝင်ဒိုးအသစ်တင်ပြီးတိုင်း မဖြစ်မနေ အင်စတောလုပ်ရတဲ့ဆော့ဝဲများဖြစ်တဲ့ - All in One Runtimes 2.3.6
AK MOBILE NETWORK at 2:57:00 PM 0
All in One Runtimes 2.3.6 နောက်ဆုံးထွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝင်ဒိုးအသစ်တင်ပြီးတိုင်း မဖြစ်မနေ အင်စတောလုပ်ရတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်တဲ့ All in One Runtimes လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Net Framework.DirectX,Flash Player, Java,Visual C++,Sliverlight.စသည်တို့ကို တခုချင်းရှာဖွေ ဒေါင်းလုပ်နေဖို့မလိုဘဲ Runtimes 2.3.6 Setup ကိုအင်စတောလုပ်ရုံနဲ့ အားလုံးအင်စတောလုပ်ပြီးဖြစ်သွား မှာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 364 Mb ရှိပြီး Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32-bit or 64-bit) အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ အသုံးပြုလိုတဲ့သူများ အောက်က Link ကနေ Download လုပ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Internet Broser တွေထဲမှာ အားလုံးထက်100% လောက်မြန်ဆန်တဲ့ - Maxthon Web Browser
AK MOBILE NETWORK at 2:12:00 PM 0
AK MOBILE NETWORK at 2:11:00 PM 0
AK MOBILE NETWORK at 2:09:00 PM 0
AK MOBILE NETWORK at 2:05:00 PM 0
AK MOBILE NETWORK at 2:02:00 PM 1
Than Toe Aung at 2:00:00 PM 0
Than Toe Aung at 1:15:00 PM 0
Than Toe Aung at 1:11:00 PM 0
Than Toe Aung at 1:05:00 PM 0
Than Toe Aung at 10:17:00 AM 0
Android 4.0 and higher. v0.8.0.77
Than Toe Aung at 10:14:00 AM 0
Android 2.3 and higher. v1.1.4
Android 2.3 and higher. Game cache. v1.1.4
Win Hlaing at 10:10:00 AM 0
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသော ဘော်ဒါတွေ စိတ်ချလုံခြုံရမယ့် apk လေးတစ်ခု Lockdown Pro updated တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ Version သစ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့မိမိဖုန်းမှာ SMS, Gmail, Facebook, Whatsapp, SnapChat, Instagram, Viber, Line, တွေအပြင်အခြားသော App တွေကိုကိုယ်မသိပဲဖွင့်ကြည့်မရအောင် Pattern Lock, Classic Lock & Calculator Lock စသည့်3မျိုးထဲကကနေမိမိကြိုက်ရာနဲ့ရွေးပြီး lock ချထားလို့ရတဲ့ App လေးပါ။ကျနော် အောက်မှာ Screen Short ရိုက်ပြထားပါတယ်။ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့7.2MB ဖြစ်ပြီးAndroid : 2.3 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။